उसेन बोल्टसंग एक रातको कथा
एजेन्सी,१७ भदौं । रियो आलम्पिकमा तेस्रोपटक स्वर्णपदकको ह्याट्रिक गरेर चर्चामा आएका जमैकाका धावक उसेन बोल्ट यतिबेला आफ्नो यौन जीवनका कारण थप चर्चामा छन् । उसेन बोल्टले रियोमा ४ गुणा १ सय मिटर रिले दौड जितेसंगै ब्राजिलकै महिला जेडी दुराटेसंग ओलम्पिक भिलेजमा एक रात बिताएको समाचारले सनसनी फैलाएको छ । समाचार अनुसार रियाको एक नाइट क्लबमा […]
दीपिका प्रसाई, उमेर २१ बर्ष, उचाइ ५ फिट ६ इन्च । यसै बर्ष सोसल वर्कमा स्नातक उत्तीर्ण – उनको प्रारम्भिक परिचय यत्ति हो । मोडलिङमा सक्रिय भएको कति भयो ? एक बर्षजति भयो । यो अवधिमा म फोटोसुटमा बढी सक्रिय रहेँ । भर्खरै मात्र चोकोपनको टिभिसीमा अभिनय गरेकी छु । चलचित्रमा आउने योजना कसरी […]
शहरमा नयाँ पुस्ताका केटाकेटीका सात बार सातै मायालु
काठमाडौं, १० भदौं । शहरी युवा पुस्तामा एउटा यस्तो जमात पनि छ, जो प्रेम र सम्बन्धलाई साह्रै हलुका ठान्छ । दुईचार जना गलफ्रेण्ड वा ब्वाईफ्रेण्ड बनाउनु उनीहरु सामान्य मान्छन् ।प्रेम निःश्वार्थ हुन्छ, निः शर्त हुन्छ भन्नेजस्ता पुराना कुरामा उनीहरुलाई कुनै रुचि छैन । प्रेमलाई सपिङ, घुमफिरजस्ता आफ्ना इच्छा र आवश्यकता पूर्तिका औजार बनाउनुमा उनीहरु कुनै […]
महंगी नायीकाको सुचिमा चिनियाँ अभिनेत्री फान बिङ बिङ पनि
एजेन्सी, ८ भदौं । विश्वका महंगा नायिका–गायिकामा चिनियाँ अभिनेत्री र पपगायिका फान बिङ बिङ पनि परेकी छन् । गतबर्ष २ करोड १० लाख डलरमा घर किनेपछि फोब्र्सले फानलाई चौथो स्थानमा राखेको हो । प्रथम स्थानमा अभिनेत्री जेनिफर अनिस्तोन, दोस्रोमा जुलिया रोबर्टस् र तेस्रोमा एञ्जेलिना जोली छन् । फान सन् २०१३ देखि शीर्ष सय जनामा पर्दै […]
सृष्टीको तीज गीत ‘शिरैमा सिरफूल’ (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । गायिका सृष्टी चन्दले तिजको अवसर पारेर ‘शिरैमा सिरफूल’ बजारमा ल्याएकी छन् । गोल्डेन क्रियशनले बजारमा ल्याएको गीतको शब्द तथा लय संकलन संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको छ । बुद्ध सायमीको संगीत संयोजन रहेको गीतमा सृष्टि चन्द र यमुनाको स्वर रहेको छ । गीतले पुराना तिज गीत र धर्म संस्कृतीको झल्को मेटाइदिने उनको भनाइ छ । […]
हो, सेक्स प्राकृतिक आवश्यकता हो तर ……
काठमाडौं,२३ साउन । काम, काम र काम । कामभित्रै मिसिउँजस्तो लाग्छ, नायिका अनामिका चौलागाईंलाई । त्यसैले त उनी भन्छन् ‘जीवन संघर्ष हो, जति गरे पनि सकिँदैन ।’ काभ्रेको पाँचखालमा सामान्य परिवारमा जन्मिएकी अनामिका करिब आधा दशकदेखि कलाकारितामा सक्रिय छिन् । उनले दुईवटा चलचित्रमा भूमिका निभाएपछि यो क्षेत्र नै छोडेर बसिन् । ‘मभित्र कलाको नशा बसिसकेको […]
दिपीका भने हुरुक्कै हुन्छन् सलमान खान
भारत, २१ साउन । एउटा विज्ञापनको सुटिङका क्रममा रहेका बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानले जब दीपिका उनी भएको स्टुडियोमा छिन् भन्ने थाहा पाए, उनी सुटिङ नै रोकेर दीपिकालाई भेट्न गए । त्यस क्रममा उनीहरूले लगभग दुई घन्टा गफगाफ गरे । सलमान दीपिकासँग गफिन थालेपछि दुई घन्टा सुटिङ रोकिएको हो । बलिउडका दुई हस्तीको एउटा इभेन्टमा चिनजान […]
पाकिस्तानमा कट्टरता तोड्दै यी केटी
एजेन्सी,१९ साउन । नांगो नाच नाच्ने पाकिस्तानी मूलकी अमेरिकी नादिया अलि अभिनित चलचित्रमाथि पाकिस्तानले प्रतिबन्ध लगाएको छ । २४ बर्षीया नाडिया भन्छिन् पाकिस्तानले मेवरो चलचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाएको नभई मैंले अश्लिल दृष्य दिदा स्कार्फ लगाएको भनेर विरोध जनाएका मात्र हो । अश्लिल चलचित्रमा अभिनय गर्दा मुस्लिम युवतीहरुले लगाउने स्कार्फ लगाउँदै अएकी उनी वेश्यावृत्ति समेत गर्छिन् । […]
ऐश्वर्याले रणवीर कपुरसँग ‘हट सिन’ दिएपछि….
केही दिन यता बच्चन परिवारमा निकै खटपट चलिरहेको छ । यसको कारण हो– ऐश्वर्या राय बच्चनको अभिनय । ऐश्वर्याले आगामी फिल्म ‘ए दिले मुस्किल’मा गरेको अभिनयलाई लिएर बच्चन परिवारमा व्यापक चर्काचर्की भएको छ । फिल्ममा उनले रणवीर कपुरसँग ‘हट सिन’ दिएको कुरालाई लिएर बच्चन परिवार रिसाएको भारतीय मिडियाको दाबी छ । यही सिनलाई लिएर ऐश्वर्यालाई […]
नेपालमा ७२ प्रतिशत युवक र ६२ प्रतिशत युवती प्रेम विवाहका पक्षमा
काठमाडौं,१७ साउन । देखिएका छन् । सोही उमेर समूहका ५३ प्रतिशत युवक तथा ४५ प्रंतिशत युवतीहरु अन्तरजातीय विवाह गर्न मनपराउने गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । किशोर किशोरी तथा युवा सर्वेक्षण २०१०/०११ को अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । सो सर्वेक्षणले १५ प्रतिशत युवक र ८ प्रतिशत युवती विहे नगरी संगै बस्न मात्र मनपराएको समेत देखाएको […]